I-Semalt: Indlela Ukudluliswa Kwemoto Kuthinta Ngayo Idatha Yakho
Iyini ithrafikhi yokudluliselwa? Kungani kubalulekile? UJack Miller, iMenenja yeMpumelelo Yezimakhasimende Ephezulu Semalt , uchaza ukuthi ukuhanjiswa kwezimoto yiyona ingxenye yethrafikhi ehlala kusayithi lakho ngomunye umthombo. Umthombo ungaba isixhumanisi esivela kwenye isizinda. I-Google Analytics yazi ngokushesha lapho ithrefikhi yewebhu ingakafiki khona kusayithi lakho. Njengoba kunjalo (i-Google Analytics) izobonisa amagama wesizinda alawa mawebhusayithi njengemithombo yokuthutha yomgwaqo emibikweni yayo.
Idatha yakho ithinteke kanjani uma ungabandakanyi ithrafikhi yokudlulisela?
Kungokuzenzakalelayo ukuthi abathumelayo baqala ngokuzenzakalelayo izikhathi ezintsha. Kodwa-ke, uma ukhetha ukukhipha noma yimaphi umthombo wokudlulisela, khona-ke ukuhamba kwewebhu kusuka ezizindeni ezingabandakanyi kungabangeli izikhathi ezintsha. Njengoba kusobala, uma ufuna ukuhanjiswa kwezimoto ukuze uqalise amahora amasha ngakho-ke akufanele ufake izizinda kulolu hlu lokuxoshwa.
Kusukela esimweni esingenhla, ungabona ukuthi njengoba ukuhanjiswa kubangela izikhathi ezintsha, ngaphandle kokudluliselwa kokufakazela ukuthi kuthinta indlela amasaka akho abalwa ngayo. Lokhu kusebenzisana kungabalwa njengengxenye eyodwa noma eminingi ngokuya ngokuthi ungabhekana kanjani nokudluliselwa. Ngokwesibonelo, umsebenzisi ku-mysite.com uvakashela iwebhusayithi yakho; yoursite.com bese ubuyela ku-mysite.com. Uma ungafaki iwebhusayithi yakho (yoursite.com), khona-ke bobabili amaseshini abalwa. Kanye njalo lapho ehlala khona ku-mysite.com. Uma ngakolunye uhlangothi, ungabandakanyi i-yoursite.com bese kuvele iseshini eyodwa kuphela. Yileyo ndlela ukuthi ngaphandle kwezimoto zokudlulisa kuthinta kanjani ukuthi izibalo zakho zibalwe kanjani..
Izicelo ezivamile zokungabikho kokudluliselwa
ekusetshenzisweni kokukhokha komuntu wesithathu
ukulandela ukulandelwa kwesizinda
Kufanele uqaphele iqiniso lokuthi ithrafikhi yewebhu kuphela kusuka kusizinda kanye nezizinda zayo ezingaphansi zingasuswa. I-Traffic evela kusizinda ezinemikhakha yochungechunge lwezintambo ayikho.
Isibonelo, uma ungafaki ukuthunyelwa kwe-traffic kusuka website.com, khona-ke ukuhamba kwewebhu kusuka kuwebhusayithi yewebhusayithi nesizinda esingaphansi kwesinye i-website.website.com ayifakiwe. I-web traffic kusuka kwenye-website.com ayikashiywa ngaphandle.
Indlela yokudala uhlu lokungabikho lokudluliselwa
kuqala ngokungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics
chofoza ku- 'Admin'
usebenzisa imenyu yehla phansi endaweni ethile kukholomu ye-akhawunti yakho, khetha indawo ongathanda ukuyifaka
chofoza ku-Tracking Info
engeza igama lesizinda bese udala uhlu lwakho
londoloza izinguquko, futhi ulungile ukuhamba
Ungasusa kanjani isizinda kusuka ohlwini lokukhishwa?
Uma ngesizathu esithile waziwa kuwe ukuthi ucabange kabusha ukususa isizinda ohlwini lokungeniswa bese ungenza kalula. Sebenzisa izinyathelo ngenhla ngaphandle kwemininingwane encane - kunokuba wengeze ukudluliselwa, ususe. Qedela ngokuchofoza Susa i-Domain bese ulondoloza izinguquko.
Qiniseka ukuthi uhlu lwakho lokubamba lusebenza ngokulihlola. Ochwepheshe batusa ukuthi usebenzise Ukuqopha komsizi we-Google we-Tag. Kuzokutshela lokho okushiwo ngaphandle nokuthi yini engekho.
Kunezikhathi lapho ukukhishwa kwemoto kungabonakali khona embikweni wakho. Kungenzeka ngoba:
abasebenzisi bavakashele isayithi lakho ngaphambi kokudala uhlu lokungabikho